PDF Qalabka Dayactirka. PDF Soo kabashada Software. Hagaaji PDF Faylka.
DataNumen PDF Repair is ugu fiican PDF qalab kabashada adduunka. Waxay dayactiri kartaa Acrobat musuqmaasuq ama waxyeello soo gaadhay PDF faylasha iyo dib u soo kabashada inta ugu badan ee xogtaada ee suurtogalka ah, taas oo yareyneysa luminta musuqmaasuqa faylka.
maxaad DataNumen PDF Repair?
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen PDF Repair v2.6
Taageer si aad u soo ceshato dhammaan noocyada Acrobat PDF files.
Taageero soo kabashada bogagga iyo sidoo kale sawirrada ku jira PDF dukumiintiyada.
Taageero dayactir kala duwan PDF khaladaadka qaabka faylka.
Taageero lagu dayactirayo PDF faylasha aan u hoggaansamin PDF faahfaahinta.
Taageero lagu dayactirayo PDF faylasha ku jira warbaahinta khaldan, sida diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Taageero si loo dayactiro qayb ka mid ah PDF files.
Taageero si loo helo oo loo xusho PDF faylasha lagu hagaajinayo kombiyuutarka deegaanka.
Taageer isdhexgalka Windows Explorer, si aad u dayactiri karto Acrobat PDF ku fayl garee liiska macnaha guud ee Windows Explorer si fudud.
Isticmaalka DataNumen PDF Repair si looga soo kabsado Waxyeello ama Musuqmaasuq PDF files
Marka Acrobat-kaaga PDF faylasha way waxyeeloobeen ama musuqmaasuqeen oo si caadi ah uma furi kartid, waad isticmaali kartaa DataNumen PDF Repair si loo baaro PDF faylasha iyo soo kabsadaan xogta faylasha sida ugu macquulsan.
Fiiro gaar ah: Kahor intaadan soo ceshan wixii dhaawac ama musuqmaasuq ah PDF Fadlan la soco DataNumen PDF Repair, fadlan xir Acrobat Reader iyo codsi kasta oo kale oo laga yaabo inuu marin u helo PDF gudbiso.
Xullo waxyeelada ama musuqmaasuqa PDF faylka la dayactirayo:
Waad ku dari kartaa PDF si toos ah magaca faylka ama guji kan badhanka si aad u caleenta u xulato feylka. Waxa kale oo aad riixi kartaa badhanka si aad u hesho PDF faylka lagu hagaajinayo kombiyuutarka deegaanka.
Marka la eego, DataNumen PDF Repair badbaadin doonaa go'an PDF fayl u gal fayl cusub oo lagu magacaabo xxxx_fixed.pdf, halka xxxx uu yahay magaca isha PDF faylka. Tusaale ahaan, il ahaan PDF faylka Waxyeellopdf, Magaca asalka ah ee faylka go'an waa la dhaawici doonaa_fixed.pdf. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
Click ah batoonka, iyo DataNumen PDF Repair doonaa start iskaanka iyo hagaajinta isha PDF faylka. Bar horumarka
Nidaamka dayactirka ka dib, haddii isha laga helo PDF faylka si guul leh ayaa loo dayactiri karaa, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale:
Hadda waxaad furi kartaa go'an PDF ku xaree Acrobat Reader ama wixii kale PDF codsiyada ku habboon.
DataNumen PDF Repair 2.6 waxaa la sii daayay Diseembar 21, 2020
DataNumen PDF Repair 2.4 waxaa la sii daayay Nofeembar 6th, 2020
DataNumen PDF Repair 2.3 waxaa la sii daayay Nofeembar 11th, 2019
DataNumen PDF Repair 2.1 waxaa la sii daayay 31 Ogosto, 2013
DataNumen PDF Repair 2.0 waxaa la sii daayay Maarso 16, 2009
Dib u qor mishiinka dayactirka.
DataNumen PDF Repair 1.0 waxaa la sii daayay 4 Ogosto, 2005
Qalab awood leh oo ka soo kabanaya Acrobat musuqmaasuq ah PDF files.